Ọ dịbeghị anya ọ bụ ihe nzuzo na ihe kariri ọkara nke ndị inyom bi n'ụwa a echedịghị ihe orgasm dị. Ihe kachasị njọ bụ na ọnụ ọgụgụ dị nta nke ụmụ nwanyị ka na-ekpebi ịnakwere nke a, ọbụlagodi na-anwa ịchọta ngwọta maka nsogbu ahụ. N'ezie, ọ bụ nanị pasent ole na ole nke ụmụ nwanyị nwere ike ghara ịnweta orgasm n'ihi ọrịa ọdịnala nke ọdịdị nke akụkụ anụ ahụ, n'ihi na onye ọ bụla ọzọ nwere ngwọta maka nsogbu ahụ.
Gini mere enweghi m ike inweta orgasm?
Na enweghị orgasm nwere ike inwe ọtụtụ ihe. Mgbe ịchọtara ihe kpatara gị "anaghị arụ ọrụ," ị ga-aghọta ihe ịkwesịrị ime iji nweta orgasm. Ka anyi gbalịa ichota ihe nwere ike igbochi obi uto:
Ugboro ugboro, nsogbu ahụ dị na oge ị na-enwe mmekọahụ. Ọ dị obere mgbe nwa agbọghọ na-enwe obi ụtọ na mbụ mmekọahụ. Cheta ndị enyi gị mbụ: lee ka ha si eche echiche ma dị nro, ole ha na-ege gị ntị. O kwere omume na ndị mmekọ mbụ gị bụ ndị na-achọ ọdịmma onwe ha, ha echedịdịghị otu esi enyere nwanyi aka inweta orgasm.
Cheta, ma ị nwara orgasm n'oge masturbation: n'ụzọ dị oke mma, iji nweta ọgwụ ike siri ike nye nwanyị ahụ ọ dị mfe karịa site na mkpali nke onye na-agba ọsọ. N'aka nke aka, nke a na-egosi na ị naghị ata ahụhụ site na anergasmia, ma n'otu oge ahụ, ị ​​na-eme ka ọrụ nke onye òtù ọlụlụ gị rụọ ọrụ. Ọtụtụ mgbe, ndị inyom na-ahụkarị ịnata orgasm n'ihi mmerụ ahụ na-akpali akpali, ogologo oge "meghere" maka orgasm maọbụ.
Kedu ka ị ga - esi nweta ike ma ọ bụrụ na enweghị ntụkwasị obi zuru oke n'etiti ndị mmekọ? Ọtụtụ mgbe, nwanyị nwere ahụmahụ, na-enyocha onwe ya ma na-achọ ihe mere onye ọ hụrụ n'anya apụghị iji mezuo ya. Ọtụtụ mgbe, enweghi mkparịta ụka n'ezoghị ọnụ n'etiti ndị di na nwunye, mgbe nwanyi na-ekwu okwu n'ihu banyere mmetụta na egwu ya. Ọfọn, dị ka mmadụ nwere ike ịghọta ihe na-atọ gị ụtọ, mana gịnị mere ị ji atụ ụjọ, ma ọ bụrụ na gị onwe gị agwaghị ya banyere ya? Gwa ya banyere mmetụta gị na ọchịchọ gị, n'ọnọdụ ọchọrọ ịchọrọ ịchọta ihe ọ bụla, ma eleghị anya ịchọrọ ikuku pụrụ iche. Gwa onye ị hụrụ n'anya - ịtụkwasị obi na ikwuputa eziokwu na-edozi nsogbu ndị yiri ya.
Ime ime na ịmụ nwa. Enwere echiche na mgbe ọ mụsịrị nwa, nwanyị malitere ịmalite ngwa ngwa ma gbanwee ọsọ ọsọ ahụ. Site n'echiche echiche, nke a bụ eziokwu ahụ, ma site na echiche uche, ihe dị iche. Mmetụta ịda mbà n'obi na ọnọdụ ọnọdụ hormonal nke nwanyị na-eme ka ọrụ dịịrị di ma ọ bụ nwunye ike. N'ebe a, a ghaghi ilebara anya anya nke ukwuu na usoro nke inwe mmekọahụ, banyere nkwadebe mmetụta uche nke nwanyị.
Ụzọ iji nweta orgasm
Ugbu a ịchọtala ihe kpatara gị ma soro onye ị hụrụ n'anya kwurịta ya, ị nwere ike ịmalite ịrụ ọrụ n'onwe gị. Enwere uzomatu di mfe n 'uz o isi m uta ot' ue si enweta ngwa ngwa ngwa ngwa: mee ka ah 'u belata ma mee ka echiche gi daj u. Kedu ihe nke a pụtara:
Nchegbu nke akwara ime. Site n'oge ruo n'oge n'oge ahụ, mee ihe a na-akpọ Kegel na-emepụta: mpikota onu ma dozie ahụ ike ndị na-enyere aka ịnọgide na-achọ ịmalite. Ihe nke a na-enye: enwere ọbara ka ọ bụrụ akụkụ nke obere pelvis ma dị ka ihe si na - emetụ ya n'ahụ.
Ntughari. Ya mere enwere ihe omuma nke nwanyi, na enweghi oge nke oge mgbe echere echiche ya. Gbalịa gbanyụọ ụbụrụ ma gbochie echiche nke echiche, na-enye mmetụta gị site na aka nke onye òtù ọlụlụ. Atụkwasịla obi na nkwenye nke onye òtù ọlụlụ gị, duru ya aka, gwa ya ihe ị ga-eme na otu esi. Gee ntị na mmetụta gị: site n'enyemaka nke obi mgbawa, ọ ga-adị mfe ịchọta ebe ị dị mfe ịnweta orgasm.
Gbalịa ka ị ghara igbu oge ngwọta ahụ, n'ihi na onye ọlụlụ nwere ike ọ gaghị ama maka ya. Nwoke gị agaghị enwe ike ịghọta otú ị ga-esi nyere nwanyị ị hụrụ n'anya aka ịmalite ịkwa iko, ruo mgbe ị ga-ewere nzọụkwụ mbụ.
Mmekọahụ mgbe nile
Kedu otu esi eme omume n'àkwà?
Na-enwe obi ụtọ maka ụmụ nwoke
Kedu ka m si jiri obi umeala jụ ịgakwuru otu nwoke?
Uru nke Mmekọahụ Mmekọahụ
Ụzọ nchebe site n'afọ ime
Ị nwere ike ịzụ azụ na-enye nwa ara?
Kedu esi esi esi osikapa esi nri?
Microcurrents maka ihu
Kedu ka esi asacha isi?
Usoro ngwangwa na mgba maka ihe mara mma
Kedu otu esi ahọrọ eriri ọkụ eletrik?
Cordilina - nlekọta ụlọ, ndụmọdụ bara uru maka ndị mbido
Esi emeso dermatitis?
Kedu otu esi esi zụọ ihe?
Naomi Campbell gara ụbọchị ya na Idris Elba
Nri na gastritis na ala acidity
Egwu na-acha anụnụ anụnụ
Ndụmọdụ site na supermodel El MacPherson: otu esi ahọrọ mmanya zuru okè maka oriri
Ọkpụkpụ nnukwu ụkwụ
Kedu otu esi kụzizi nwa nkita na ìgwè?